သမ္မတရဲ့ နိုင်ငံတော်အခြေပြ မိန့် ခွန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » သမ္မတရဲ့ နိုင်ငံတော်အခြေပြ မိန့် ခွန်း
သမ္မတရဲ့ နိုင်ငံတော်အခြေပြ မိန့် ခွန်း
Posted by kai on Jan 28, 2010 in Community & Society, Critic, Politics, Issues, U.S. News | 1 comment
Immigration Reform state of union address
မနေ့ညက သမ္မတမိန့်ခွန်း(State of the Union address)နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီလိုမိန့်ခွန်းကို သမ္မတတွေဟာ တနှစ်တခါပြောရလေ့ရှိပြီး အခုအကြိမ်ဟာ အိုဘားမားအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ State of the Union addressကို ဗမာလိုဘယ်လိုပြန်မလည်း စဉ်းစားရာက ဗီအိုအေကသတင်းဖတ်မိတော့ သူတို့ပြန်ထားတာ “လှ”တာမို့ အဲဒါပဲယူသုံးလိုက်ပါတယ်။ ”နိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်း” တဲ့လေ..။
၀ိကီမှာတော့ အောက်ကအတိုင်းအဓိပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။ ဆက်စပ်ကြည့်နိုင်ဖို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
The State of the Union is an annual address presented by the President of the United States to the United States Congress. The address not only reports on the condition of the nation but also allows the president to outline his agenda and national priorities to Congress.
မိန့်ခွန်းဖတ်ကြည့်ပြီး လေကန်ဝေဖန်မလို့ပါ။ အခုခေတ်က ဒီသမ္မတဝေဖန်လေကန်ရင်ခေတ်မှီတယ်လို့တောင်ပြောရမယ့်ခေတ်မဟုတ်လား..။
ဟုတ်ကဲ့.. ကျုပ်က ဒီမိုကရက်လည်းမဟုတ်သလို ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်ဖက်ကလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ (သတင်းတွေရေးနေရတာမို့)သတင်းသမားပဲဆိုပါတော့..။
ဒီတော့ ဗမာဖြစ်တာမို့ဗမာနဲ့ဆိုင်တာဘာများပြောမလဲ အတင်းဆက်စပ်ပြီးလိုက်ကြည့်နေမိတာပါ။
စာရင်းချုပ်တော့ ဘာမှမတွေ့လိုက်ဘူးပဲဆိုပါစို့။ မြောက်ကိုရီးယား၊ အီရန်၊ ဟေတီ၊ ပနားမားနဲ့ ကိုလန်ဘီယာတောင်ထည့်ပြောပေမဲ့ ဘားမားတော့ (သူနဲ့နာမယ်ဆင်နေလို့လားမသိ) ထည့်ကိုမပြောဘူးဆိုပါစို့။
ဘယ်ထည့်ပြောမလည်း…ကွန်ဂရက်နဲ့ ဆီးနိတ်ကတဆင့် သူ့စားပွဲပေါ်ရောက်အောင် (Issue)တခုလုပ်ပြီး တင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူလည်း တယောက်မှကို မရှိတာနော..။
– ဗမာအများစုမရှိတဲ့- ကျမ်းမာရေးအာမခံနဲ့ဆိုင်တဲ့ health care reformဆက်လုပ်ပါမယ်။ (ကျုပ်တော့ ကြိုက်တယ်။ ဘယ်နှယ်..ဒီကကျမ်းမာရေးစံနစ်အရ ..နှလုံးရောဂါရှိတဲ့ ဗမာက..ကျမ်းမာရေးအာမခံရှိလျှက်နဲ့…ရင်ဘတ်အောင့်တော့ မြန်မာပြည်က သွေးဆေးမှာသောက်နေရတဲ့ဘ၀လေ..)
– ဒီနှစ်ထဲ Immigration Reformလုပ်ပါမယ်။( ဗမာတွေထက် ၁၂သန်းလောက်ရှိတဲ့ ပဲတွေ(လက်တီနို-နာ)ချည်းကောင်းစားကြမှာပါ။ ဗမာတွေက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကောင်းမှုနဲ့ ထပ်ဆောင်းပြီး… ရှိတဲ့လူရဲ့ ၉၀ရာနှုန်းလောက်က တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရှိကြတာကိုး..)
– ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဖလော်ရီဒါနဲ့ အီလီနွိုက်မှာ ကျည်ဆန်ရထားလိုင်းတွေ လုပ်ပါမယ်။(လတ်စ်ဗေးဂစ်-အယ်လ်အေမဟုတ်လို့စိတ်တော့ သိပ်မကောင်း..။ ဟုတ်ရင်လည်း မွဲမှာပဲ..အပါတ်တိုင်း..လတ်စ်ဗေးဂတ်စ်သွားနေလို့လေ..)
– စစ်ပွဲကြီးတွေ jဖြည်းဖြည်းချင်းရပ်ပစ်လိုက်မယ်ဖြစ်ပြီး စစ်ပွဲအသစ်ဖြစ်လာဖို့စိတ်မကူးပဲ တခြားနိုင်ငံတွေကိုအရေးယူဖို့ဆိုရင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာနဲ့ပဲ သွားပါမယ်။
– ဗမာတွေ အလုပ်ပြုတ်နေ၊ မရှိနေတဲ့လူတွေလည်း ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းငွေ(ဒါမှမဟုတ်) အစိုးရထောက်ပံ့ငွေနဲ့လောက်ငှနေတာမို့ အလုပ်အကိုင်အသစ်တွေဖြစ်လာမဲ့ ရထားလမ်းဖောက်တာတွေ၊ ညူစွမ်းအင်၊ ရေနံစတာတွေနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ ဗမာတွေနဲ့သိပ်တော့ မဆိုင်…။( လောက်ငှဆို …နဂိုအလုပ်ရှိတုန်းကထက်တောင် ထောက်ပံ့ငွေက ပိုနေတာမို့ …တချို့ ရွှေတွေဝယ်စုပြိး ဒုက်ခတောင်ေ၇ာက်နေကြတယ်ဆိုပဲ…)
– ပညာရေးကလည်း ထူးတော့ထူးမယ်..ကောလိပ်ကျောင်းလခတွေ ဈေးပေါလာမယ်…ဒါပေမဲ့..စောင့်ကြည့်ပါဦး…ဆိုတာမျိုးပါပဲ..။
ဒီသမ္မတ အိမ်ဖြူတော်ရောက်တာမှ တနှစ်ရှိသေးတယ်..။ (အနည်းဆုံး)၄နှစ်သွားရမဲ့ခရီးမှာ ၄ပုံတပုံပဲရှိသေးတယ်..လူတွေသိပ်ပြီး မျှော်လင့်နေကြသလားတော့မသိ…။
သမ္မတ အိုဘားမား နိုင်ငံတော် အခြေပြ မိန့်ခွန်း စီးပွားရေး ဇောင်းပေး
သမ္မတ အိုဘားမား နိုင်ငံတော်အခြေပြ မိန့်ခွန်း ပြောကြားနေစဉ်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၀။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ တခြားပြဿနာတွေကို အတူတကွ ဖြေရှင်းကြဖို့နဲ့ အစိုးရအပေါ် အယုံအကြည် လျော့နည်းလာနေတာတွေ မရှိရလေအောင် ၀ိုင်းပြီး လုပ်ဆောင်ကြဖို့ အမေရိကန် ပြည်သူတွေကို သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမား (Barack Obama) က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းက သမ္မတ အိုဘားမား ပြောဆိုခဲ့တဲ့ နှစ်စဉ် နိုင်ငံတော်အခြေပြ မိန့်ခွန်းထဲမှာ စီးပွားရေး ပြဿနာကို ထိပ်တန်းဦးစားပေး ဖြေရှင်းရေး အဓိကထား ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်း ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် ကင့်တ် ကလိုင်း (Kent Klein) ၀ါရှင်တန်ဒီစီကနေ သတင်းပေးပို့ထားတာကို ကိုကျော်အောင်လွင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
သမ္မတ ဘရက်ခ် အိုဘားမားက ရွေးကောက်ပွဲကာလ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းက သူ မဲဆွယ်ခဲ့တဲ့အခါ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ကတိတွေ ပေးခဲ့တာကို အမေရိကန် ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ စိတ်ပျက်နေတာတွေ၊ မကျေမနပ် ဖြစ်နေတာတွေနဲ့ သံသယ၀င်တာတွေ ရှိနေပြီဆိုတာကို သူ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ ဆိုတာက လွယ်ကူတဲ့အရာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပေမဲ့လည်း ဖြစ်အောင် သူ ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့ လက်မလျှော့ဘူး၊ ကျနော်လည်း လက်မလျှော့ဘူး။ ဒီအခြေအနေကနေပဲ အခြေအနေသစ် တခုကို ကျနော်တို့ စတင်ကြရအောင်ပါ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆန္ဒတွေကို အကောင်အထည် ပေါ်လာအောင် ကျနော်တို့ရဲ့ အားကောင်းတဲ့ စုစည်းညီညွတ်မှုကို နောက်တကြိမ် ပြသကြရအောင်ပါ။”
သမ္မတ အိုဘားမားက တနာရီလောက်ကြာတဲ့ မိန့်ခွန်းကို အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အောက်လွှတ်တော် ၂ ရပ်လုံးရှေ့မှာ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ လူတွေ မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး တုံ့ပြန်တာမျိုးကို သမ္မတ အိုဘားမားက အကြိမ်တော်တော်များများ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။
“အမေရိကန် ဒေါ်လာငွေ တန်ဖိုး ကျဆင်းနေတာထက် ပိုဆိုးတဲ့အရာတွေ ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်နေရတယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။ လေးနက်တဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ လျော့နည်းနေတာတွေကို ကြုံနေရတယ်။ နောက်လာမယ့် နှစ်တွေမှာ အစိုးရက တိုးတက်မှုတွေရအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါ့မလား ဆိုပြီး သံသယ ဖြစ်တာတွေကိုလည်း ကြုံနေရပါတယ်။”
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ ၁၀% လောက် ကျဆင်းလာတာကို ပြည်သူတွေ တော်တော်များများက စိုးရိမ်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေကြပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်အောင် အလုပ်အကိုင်တွေ နောက်တကြိမ် ပြန်ရနိုင်ရေး ဥပဒေကို အတည်ပြု ချမှတ်ပေးဖို့၊ အဲဒီကိစ္စအတွက် အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အောက်လွှတ်တော် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြဖို့ကိုလည်း သမ္မတက တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။
“ပြည်သူတွေ အလုပ်အကိုင် မရှိဘဲ ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒါဟာ သူတို့အတွက် ထိခိုက်မှုပဲ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ကူညီမှု သူတို့ လိုအပ်နေကြတယ်။ အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးရေး ဥပဒေကို ကျနော် အတည်ပြုပေးဖို့ ကျနော့်စားပွဲကို အမြန်ဆုံး ရောက်လာစေချင်ပါတယ်။”
သမ္မတရဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်တွေထဲမှာ နောက် ၅ နှစ်အတွင်း အမေရိကန် ပြည်ပပို့ကုန်တွေ ၂ ဆ တိုးလာရေး၊ ပြည်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေး အသုံးစရိတ် တော်တော်များများကိုလည်း ၃ နှစ်လောက် ထိန်းချုပ်ထားဖို့ အရေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ စပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ စနစ်တွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကိစ္စကိုလည်း ဒီမိုကရက်ပါတီက ဥပဒေပြု အမတ်တွေ အနေနဲ့ ပစ်မထားကြဖို့၊ ဒါဟာ သူ့အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုမှာ အဓိက ဦးစားပေး ကိစ္စတရပ်လည်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကနေ အဝေးကို ရှောင်ထွက်မသွားကြပါနဲ့။ ကျနော်တို့ ကြိုးစားနေတာ တော်တော်လေးကို နီးကပ်နေတဲ့ အချိန်ကျမှ ရှောင်မနေကြပါနဲ့။ အမေရိကန် ပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်ကို ပြီးအောင် လမ်းကြောင်းရှာပြီး ၀ိုင်းလုပ်ကြရအောင်ပါ။”
နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတ ပြောသွားခဲ့တဲ့ အထဲမှာ သြဂုတ်လကုန်ကျရင် အီရတ်မှာရှိတဲ့ တိုက်ခိုက်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေ အားလုံး ပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်လို့လည်း ထပ်ပြောသွားပါသေးတယ်။
“ဒါပေမဲ့ အမှားမရှိအောင် လုပ်ရမယ်။ ဒီစစ်ပွဲဟာ ပြီးနေပြီ။ ကျနော်တို့ တပ်ဖွဲ့တွေ အားလုံး အိမ်ကို ပြန်လာရတော့မယ်။”
အာဖဂန်နစ္စတန် စစ်ပွဲမှာလည်း အမေရိကန်က အောင်မြင်ရမယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာက ၀ိုင်းပြီး အထီးကျန်ထားတဲ့ အီရန်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားက နျူကလီးယားလက်နက် ပြဿနာတွေကို ပြေလည်နိုင်အောင်လည်း သံတမန်ရေး နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်း နိုင်ငံတော်အခြေပြ မိန့်ခွန်းထဲမှာ သမ္မတ အိုဘားမား ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။
Who can post an article in an article directory? Anyone who wishes to post an article can do that for free in our article directory, but if you areacustomer of ours then its our responsibility to publish your article not only in our directory but also in all other article marketing directories.